URamaphosa umise uJiba noMrwebi kwezokushushisa - Bayede News
UMENGAMELI uCyril Ramaphosa izolo umemezele ukumiswa emsebenzini kuka- Advocate uNomgcobo Jiba no-Advocate uLawrence Mrwebi abasebenzela uPhiko Lwezokushushisa kuleli iNational Prosecuting Authority (NPA) kuze kube kuyanqunywa ngokuthi bakulungele yini ukubamba izikhundla kulolu phiko. U-Advocate Jiba uyiSekela likaMqondisi Wezokushushisa kuZwelonke, kanti uMrwebi unguMqondisi Omkhulu Kwezokushushisa. URamaphosa uthathe lesi sinqumo wase ememezela isigcawu esizoholwa owayeyiJaji eNkantolo yoMthethosisekelo uYvonne Mokgoro esizobheka ukuthi basakulungele yini ukubamba izikhundla zabo. Uzosizwa u-Advocate uKgomotso Moroka nommeli uThenjiwe Vilakazi. Ukulalelwa kobufakazi kulesi sigcawu kuzoba ngokwangaphakathi okwenza abe mancane amathuba okuthi kuvuleleke kabezindaba.
Ekhuluma namanxusa amazwe aseNingizimu Afrika kuleli sonto uRamaphosa uthe basezinhlelweni zokuqasha uMqondisi Wezokushushisa emuva kokuba iNkantolo yoMthethosisekelo yakhipha isinqumo sokuthi ukuqashwa kwakhe njengeNhloko Yezokushushisa kwakungahambisani noMthethosisekelo ngakho kufana nento engekho. Encwadini ethunyelelwe u-Advocate uJiba noMnu uMrwebi uRamaphosa uthe: “Ngikubheke kabanzi ubucayi bezinsolo ezibekwayo zokuthi awukho esimweni sokuphatha isikhundla esikhulu kangaka ezweni, lapho umsebenzi wezobulungiswa uyisigaba esibalulekile futhi esibucayi kwezokushushisa, ikakhulukazi emacaleni athinta inkohlakalo nokuqashelwa kwezinto ezingamagugu omphakathi. “Uphethe isikhundla esikhulu esikunika amandla kuNPA.
Kusekusebenzeni kweNPA okubalulekile ukuthi kuthathwe isinqumo esizokwenza lolu hlaka lwezokushushiswa lube ngoluhloniphekile nolunobuholi obunesigqi.” Kuzokhulumbuleka ukuthi iNkantolo Yokwedlulisela Amacala yasichitha isinqumo seNkantolo eNkulu sokuthi laba ababili basuswe ohlwini lwabammeli basemajajini.U-Adv uJiba wayesolwa ngokuhoxisa amacala kowayeyiNhloko yeCrime Intelligence uMnu uRichard Mdluli. U-Adv uJiba wabuye wasolwa ngokungaphathi ngendlela udaba lophiko lwamaphoyisa akwaKito olwaluholwa uMajor- General uJohan Booysen. Ekhipha isinqumo uMehluleli uConnie Mocumie eBlomfontein ngoNhlangulana wathi u-Advocate uJiba wayeyiSekela likaMqondisi Wezokushushisa uMrwebi eyiNhloko Yophiko Lwamacala athinta Ezezimali okwakungamele basuswe ohlwini lwabammeli.
UZwelinzima Vavi: Isakabuli noma isishoshovu?
Bayede News Oct 26, 2019